Fanafody an-trano ho an'ny saka kofona | Noti saka
Fanafody an-trano ho an'ny deworm saka
Monica sanchez | | Fiompiana saka, Cheats
Miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana, ny katsentsitra pesky kely ihany ny fitiavantsika azy ireo. Fleas, ticks ary bibikely hafa tsy ilaina izay mety hiteraka allergy, ohatra. Mba hialana amin'ireo bibikely ireo, na anatiny na ivelany, dia zava-dehibe ny fitsaboana haingana ny namantsika. Na dia eny an-tsena dia hahitanao takelaka famonoana bibikely, pipety ary tsifotra hampiasaina amin'ny felines, azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanao bibikely famonoana bibikely ao an-trano.
Androany dia ho hitantsika ireo fanafody any an-trano ho an'ny deworm saka, tsy mametraka loza amin'ny fahasalaman'ny biby.
2 Parasy ivelany
2.1 Fanafody koka
2.2 Arotsaho ny fanafody
2.3 Fanafody kibo
3 Parasy anatiny
Alohan'ny hidiranao amin'ilay lohahevitra dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa mandaitra ny fitsaboana voajanahary, saingy tsy maintsy ampiharina matetika kokoa noho ny antiparasitika izay azonao vidiana amin'ny fivarotana biby na toeram-pitsaboana biby. Ankoatr'izay, ny fanafody any an-trano dia matetika no ampiasaina mba hisorohana fa tsy amin'ny ady, satria dia mandaitra tara. Noho io antony io, raha misy namanao manana olana lehibe amin'ny katsentsitra, na ny tsinay na ny any ivelany, dia tsara kokoa ny mitondra azy any amin'ny matihanina hilaza amintsika izay bibikely tokony hampiasaina.
Mazava ho azy, tsy toy ny akora simika, miaraka an-trano ny risika fanapoizinana dia tsy misy, noho izany dia ampirisihina mafy izy ireo rehefa mino isika na mahafantatra fa ny volom-borona dia misy allergy amin'ny singa rehetra amin'ny antiparasitika simika.
Izany dia nilaza, andao hiroso, ankehitriny eny, izany hoe inona ny fanafody an-trano azontsika omena azy ireo ny saka mba hitazonana azy ireo tsy hiparitaka katsentsitra.
Andao atomboka amin'ny bug izay hitanao voalohany: parasy, kongona, ary koka. Ireto misy bibikely vita an-trano izay tena mandaitra amin'ny famoahana azy ireo:
Mandroa amin'ny saka anao lavender na menaka citronella (na azonao atao ny mampifangaro azy roa). Raha matahotra rano ianao dia apetaho mivantana amin'ny lamba ilay menaka voahidy ary kosohy eran'ny vatanao.
Manampia sotro masirasira labiera amin'ny sakafonao. Tena manan-karena vitamina B1 izy io, izay mandroaka ny katsentsitra rehetra.
Atsofohy amin'ny menaka ny sakao Hazo dite. Ataovy anaty rano alohan'ny hampiasana azy, satria misy poizina be dia be. Avereno indray mandeha isam-bolana ny fitsaboana.
Manomàna a Fampidirana chamomileAvelao hafanaina ny rano ary apetaho moramora eran'ny vatana.
Arotsaho ny fanafody
Hetezo a voasarimakirana voadidy ary ento mangotraka ao anaty vilany misy rano. Avelao izy hipetraka mandritra ny alina ary, ny ampitso, esory ny sakao na omeo "fandroana" izy (raha ny tena izy, ny filamatra dia ny maka lamba famaohana, mandena azy ary manosotra azy manerana ny vatany).
Afangaroy amin'ny rano 150 ml ny tiana, lavender ary menaka citronella folo nilatsaka, ary apetaho amin'ny fanorana azy manerana ny vatana.
Manampia vinaingitra paoma apetaka roa sotro kely amin'ny rano 250 ml, ary atopazy ny sakao. Raha matahotra ny feon'ny tsifotra ianao dia afaka misafidy, toy ny tamin'ny tranga teo aloha, hampihatra azy io amin'ny tanana.
aggregate Menaka kanelina 80 nilatsaka anaty rano 1l, ary atondraho miaraka aminy ny sakao na raha tianao, dia omeo otra tsara izy.
Ny koka dia katsentsitra izay, tsy toy ny parasy sy ny tapakila, tsy mamela ny 'mpampiantrano', amin'ity tranga ity ny saka. Na izany aza, misy zavatra azonao atao ary izany dia mandro azy isaky ny telo andro amin'ny rano izay nanampianao ny ranon'ny voasarimakirana roa.
Aza adino ny manasa ny fandriana, ny lamba firakotra, ny lambam-pandriana ary ny hafa izay nampiasain'ny biby fitsaharana. Raha tsy mihatsara, ento any amin'ny veterinera izy hilaza aminao izay tokony hataonao mba hanafoanana maharitra ny koka.
Mba hiadiana amin'izy ireo sy hialana amin'ny katsentsitra anatiny dia azonao atao izao manome izao ny volonao:
Afangaroy izy ho maina maina anao miaraka amin'ny sakafonao mahazatra.
Mandritra ny herinandro dia azonao omena sotro kely iray izy voatavo voatavo. Afangaro amin'ny sakafo lena izy ireo ary azonao antoka fa mihinana azy ireo tsy misy olana. Ho fanampin'izany, hanompo anao izy ireo, tsy handroaka sy hisorohana ny katsentsitra ao anaty tsinay ihany, fa koa ho laxative.
Avelao ny saka malalanao (aza atao raha latsaky ny 1 taona) ny fifadian-kanina mandritra ny tontolo andro, na adiny 12 farafahakeliny, mamela anao hisotro rano tsy misy afa-tsy sotro vinaingitra paoma sotro kely. Ny ampitso, afangaro tongolo lay miaraka amin'ny sakafonao.
Mety ho toa fihetsika masiaka izany, fa mamela ny vatanao hiala sasatra mandritra ny iray andro na 12 ora mba hanadioan'ny rafi-pandevonan-kanina ny tenany amin'ny rano sotroinao, dia hanampy amin'ny fanafoanana ny moka, na amin'ny saka, alika na olombelona.
Mikasika ny tongolo lay kosa dia voalaza fa sakafo misy poizina be ho an'ny biby fiompy io, nefa hatreto dia mbola tsy nisy fanadihadiana matotra nanondro zavatra toy izany; fa ny mifanohitra amin'izany no izy: bibikely famonoana bibikely voajanahary ity sakafo ity izay, amin'ny isan'ny tena kely, dia mivadika tena mahasoa ho an'ny saka (by the way, also for humans 🙂).
Na dia fanafody mahomby be aza ianao dia tsy tokony hataonao mifady hanina mandritra ny iray andro na 12 ora mihoatra noho ireo tranga izay tsy nahitana ny vokany andrana ireo fanafody hafa.
Fantatrao ve ny tetika hafa hanafoanana ny volon'ireo bibikely?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Fiompiana saka » Fanafody an-trano ho an'ny deworm saka
39 hevitra, avelao ny anao
Sakafo alika dia hoy izy:
Ny fahadiovan'ny saka dia zava-dehibe tokoa, mba hisorohana ny aretina. Ao anatin'io fahadiovana io, ny famoahana ny biby fiompinay dia iray amin'ireo laharam-pahamehana tsy maintsy raisintsika. Ny sakafonao koa dia zava-dehibe amin'ny fahasalamana tsara.
Mamaly ny sakafon'alika
Marina dia hoy izy:
Ny katikako dia feno katsentsitra, toy ny kankana fotsy kely izy ireo, izay azoko omena mba handehanany .. Misaotra
Mamaly an'i Marina
Monica sanchez dia hoy izy:
Raha roa volana na mihoatra ny zanakao dia afaka mametraka pipeta ho an'ny saka mbola kely ianao, fa raha kely kokoa dia tsara kokoa ny manaisotra azy ireo tsirairay miaraka amina tweezers.
Ankehitriny, raha manana mari-pana 30ºC na mihoatra ianao dia omeo bata amin'ny rano mafana izy. Zava-dehibe ny handroanao azy fotsiny - amin'ny rano ihany, raha tsy efa 8 herinandro izy, izay azonao atao ny mampiasa shampoo ho an'ny zanak'ondry - raha mafana ny mari-pana, satria tsy toa antsika ny hafanan'ny vatany dia 36-38ºC ary raha omena fandroana, ohatra, rehefa ririnina dia ho mangatsiaka be izy ireo ary mety harary.
Ary, raha mbola manana izany izy, dia tsara kokoa ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hahalalana hoe inona no mahazo azy.
Mirary soa, ary mahereza!
Valiny tamin'i Monica Sanchez
sonia rodriguez dia hoy izy:
Salama: 8 volana ny saka ary marary vavony rehefa manao ny aferany, rano ihany no azony omena azy, miandry ny valinteninao aho, misaotra
Mamaly an'i sonia Rodriguez
Efa namorona azy io ve ianao? Raha tsy izany, ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny manome azy pilina ho an'ny katsentsitra anatiny amidy any amin'ny tobim-pahasalamana veterinera.
Raha misy dewormed, dia nanoro hevitra ny manam-pahaizana fa tokony hifady hanina izy indray andro any (fa mitandrema ihany, 24 ora fotsiny, tsy misy intsony), ary omeo rano mandritra io fotoana io. Manomboka amin'ny andro manaraka dia homena ron-kena amam-borona ianao.
Raha tsy hitanao ny fihatsarana ao anatin'ny roa andro, na raha miharatsy izany dia mankanesa any amin'ny mpitsabo biby.
Jhoan urueta dia hoy izy:
Salama!… Hey, ny saka ko dia manana katsentsitra, matory tontolo andro, kely ny sakafo, kivy ary tsy afaka mitsako tsara koa!… Inona no azonao atolotra ho an'ny zanako-vavy?
Mamaly an'i Jhoan urueta
Ny zavatra tsara tokony hatao amin'ireto tranga ireto dia ny fitondrana azy any amin'ny mpitsabo biby mba hitsaboana antiparasite, ary handinika ny vavany hahitana izay ananany sy ny fomba hitsaboana azy.
Laura dia hoy izy:
Salama, manana saka telo volana aho ary nomen'izy ireo pilina hanesorana parasy. Ny fanontaniako dia mandra-pahoviana no tokony hiandrasako hametraka azy amin'ny pipette
Valiny tamin'i Laura
Raha nomena pilina parasy ianao, sao dia tsara kokoa ny miandry iray volana dia apetaho parasy sy tapakila.
Valentina dia hoy izy:
Salama, manana zanakalahy kely 30 andro aho ary ny reniny efa nisara-nono azy ireo mialoha, mihinana saka saka sy ronono skim izy ireo. Ny tena izy dia, kibo mamontsina sy mafy be izy ireo. Mety ho katsentsitra ve izy ireo? Ary raha eny, azoko omena azy ireo ve ny tany na dia vitsy aza izy ireo?
Mamaly an'i Valentina
Rehefa 30 andro dia tsara kokoa raha manomboka misotro rano izy ireo, satria ny ronono omby na osy dia mety hahatonga azy ireo hahatsapa ho ratsy.
Ny kibo mivonto dia matetika famantarana ny katsentsitra tsinay. Raha azonao atao dia miezaha maka syrup antsoina hoe Telmin Unidia, araho ny torolàlana ary omeo mandritra ny 5 andro. Ho hitanao ny fihatsarany. Amidin'izy ireo any amin'ny tobim-pahasalamana veterinera.
riumer dia hoy izy:
Salama, manana zanakalahy Siamese 8 volana aho ary andro vitsivitsy lasa izay dia nihinana ahitra avy amin'ny zaridaina izy ary nanomboka nandoa, natelina izy ary hatramin'ny nandoavako azy dia tsy te hihinana izy, kely dia kely ny sakafo atrehiny ary indraindray tsy maintsy terena amin'ny tsindrona izy handray serum am-bava, inona no azoko atao? asaina atao?
Mamaly an'i riumer
Ny tsimparifary nohaninao dia mety ho ratsy endrika na nety notsaboina tamin'ny famonoana bibikely na famonoana poizina, noho izany ny toro-hevitro dia ny hitondrana azy any amin'ny vet Miaraka amin'ny alika kely dia mila mandray andraikitra haingana araka izay azo atao ianao, satria tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana izy ireo no mety ho lasa ratsy ka lasa ratsy be, ary arakaraka ny itarainan'ny fitsaboana azy ireo tsara kokoa, satria manakana azy ireo tsy hiharatsy izany.
Nahazo am-bava mandomandy ve ianao? Raha tsy natolony anao izany, dia atoroko izy ireo satria mihetsika bebe kokoa avy ao anatiny izy ireo, manala ny katsentsitra.
izay dia hoy izy:
Salama, manana saka 3 aho, ny roa amin'izy ireo dia efa ho roa taona ary ny iray kosa efa manakaiky ny herintaona, manahy izahay mivady satria tamin'ny volana Janoary dia nanomboka tamin'ny paracito ny iray tamin'ireo saka ary nitondra azy ireo hatramin'ny taona ary nahitana aretina roa taona aza, dia novidinay ho azy ny fanafody ary nodiovinay ny tranonay manontolo, nanolo lambam-pandriana izahay, ny lambam-pandriana, izay toerana rehetra nahitany atody, fa rehefa afaka 3 herinandro na iray volana dia tratry ny aretina izy dia novainay hafa izy pilina am-bava ary izany no izy mandraka androany, ary saka saka an-trano 100% izy ireo satria tsy mivoaka mihitsy, manana boatina fako sy kibble ary rano ary ambonin'izany rehetra izany dia be fitiavana!
Valio i nere
Raha azonao atao dia makà saka Strong Strong. Izy io dia pipette antiparasite izay apetaka amin'ny valan'ny vozon'ny biby, ary manala ny katsentsitra anatiny sy ivelany. Mahomby mandritra ny iray volana.
Ny pilina amidy any amin'ny mpitsabo biby dia matetika koa maharitra iray volana, noho izany dia mila manome iray ny sakafony isam-bolana ianao mba hisorohana azy tsy hanana katsentsitra indray.
ramirez maivana dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, 3 volana ny zanako-vavy ary roa andro dia tsy nisakafo izy ary indroa mandoa aho, rehefa entiko aminy ny sakafo itomaniany ary misotro rano fotsiny. inona no tokony hataoko?"
Mamaly an'i luz ramirez
Ny torohevitro dia ny hitondra azy any amin'ny veterinera. Azo inoana fa manana katsentsitra tsinay ianao izay mahatonga ireo tsy fahatoniana ireo.
Salama alina, manana saka 4 aho, ny roa dia 4 volana ary ny roa kosa efa ho herintaona, rehefa manondraka izy ireo dia mahazo kankana toa vary, inona ny omormorm voajanahary azoko omena azy ireo, noeritreretiko manome rano tongolo lay azy ireo fa tsy haiko raha hevitra tsara. Nihaino tsara ny soso-kevitrao izy, misaotra
Azonao atao ny manome azy ireo ny thyme maina, fa ny maha kely azy dia tsara kokoa ny manome antiparasitika atolotry ny mpitsabo biby azy mba ho salama haingana kokoa ireo biby.
Blanca dia hoy izy:
Salama, manana saka kely aho, tsy fantatro izay ora ananany satria nakariko avy teny amin'ny arabe izy. Mihady sy mametaka ny vodiny izy ary milay ary hitako kankana. Ataoko fa ho 2 volana eo ho eo. Inona no azoko atao?
Manana alika roa ihany koa aho, rehefa manidina izy dia mihinana ny mony fa ataoko fa voan'ny x kankana ihany koa izy ireo
Valiny tamin'i Blanca
Manoro hevitra anao aho mba hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanala azy. Raha avy any Espana ianao, dia azo inoana fa hanasitrana azy amin'ny syrup antsoina hoe Telmin Unidia, izay homenao azy mandritra ny dimy andro.
Ny alika dia azo omena ny pipet antiparasite Stronghold, izay manala ny kankana sy ny katsentsitra ivelany.
Iveth dia hoy izy:
Salama, manana saka vavy 4 volana aho ary ao amin'ny fofony dia mivoaka kankana miendrika vary azoko omena azy izy ireo mba hanjavonany
Mamaly an'i Iveth
Kely loatra aho, mamporisika anao hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanome azy syrup na pilina ho an'ny kankana. Ireo katsentsitra ireo dia mampidi-doza tokoa amin'ny saka kely toy izany ka mbola tanora, ary tsara kokoa ny tsy atao an-doza.
Salama, manana zanaka vavy 3 volana aho, androany dia tsapako fa ny kankana nivoaka avy teo am-balahany ka azoko omena azy hanafoana
Manana telo volana dia tsara kokoa ny manome azy syrup antiparasite, atolotry ny mpitsabo biby.
Luis Castro dia hoy izy:
Narary mafy ny saka ko ary nahita azy ilay veterana ary nomeko tsindrona miady amin'ny otrikaretina izy nefa tsy haiko na inona na inona. Azonao atao ny mihetsika irery fa afaka manome fanampiana anao aho misaotra
Valiny tamin'i Luis Castro
Miala tsiny fa ratsy ny saka, fa tsy mpitsabo biby.
Manoro hevitra anao aho mba hangataka hevitra matihanina faharoa raha tsy resy lahatra amin'ity mpitsabo biby ity ianao.
Fiarahabana sy fankaherezana.
Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby. Raha zanak'akano kely toy izany dia tsara kokoa ny tsy manao vivery ny ainy.
aby dia hoy izy:
8 volana ny saka ary 2 volana lasa izay dia nanjavon'izy ireo izy saingy omaly dia nahita kankana sasany miendrika vary ao anaty ny voany indray, azoko esorina voajanahary ve?
Mamaly an'i aby
Ny tena atolotra indrindra amin'ity tranga ity dia ny fanomezana syrup antiparasite notendren'ny mpitsabo biby. Azonao atao koa ny mametraka pipite antiparasite avy any Stronghold na Advocate ho an'ny saka (tavoahangy plastika tena kely izy, sahabo ho 3cm ny haavony, ao anatiny ilay ranon-javatra antiparasitika), noho izany dia hofongaranao tsy ny kankana ihany, fa koa ny kongona sy / na bitika. mety manana ianao.
Viviana dia hoy izy:
Salama alina, 5 taona ny saka ko ary tamin'iny andro iny dia nanomboka nitomany izy alohan'ny nandehanany, rehefa hitany ilay seza dia nisy rà moka mena izy ireo ary somary malefaka kosa ny fivondronany.
Te hahafantatra izay azoko omena aho, satria manandrana mandany azy aho ary mandoa ny paty na ranoka omeko azy foana.
Misaotra anao ary mifantoka hatrany aho.
Valiny tamin'i Viviana
Miala tsiny aho fa diso ny saka, fa tsy mpitsabo biby.
Ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny hitondra izany any amin'ny matihanina, izay handinika azy io ary afaka milaza aminao izay ananany, satria tsy ara-dalàna raha mandoto amin'ny rà izy.
Mary Luz Carmona dia hoy izy:
Tsara, manana zazalahy aho 🐈 efa 5 volana izy, nandritra ny roa andro dia hitako fa malahelo izy eo amin'ny toerana onenako amin'izao andro izao, ny toetr'andro dia niova tamin'ny andro mangatsiaka iray, ny soatoavina iray hafa izay nitazona ny fandriana dia mihinana kely ary misotro rano kely dia kely izy Tena nilaina aho ary natahotra aho satria tsy raha tiako izany dia tsy mivoaka izy na mitsambikina am-baravarankely hivoaka, inona izany, azafady ampio aho, mihaino torohevitra aho, misaotra
Valiny tamin'i Mary luz Carmona
Salama Maria jiro.
Manoro hevitra anao aho ny hitondranao azy ho neutered raha tsy mbola neutered izy. Amin'ity fomba ity dia ho tony ianao satria tsy hanana izany filana mivoaka izany.
Na izany na tsy izany, raha hitanao ilay izy dia manoro hevitra anao aho mba hizaha sao misy zavatra hafa.
Krishna dia hoy izy:
Salama, manana zanakalahy kely 2 na 3 volana aho izay nomena ahy ary manamboatra ny eses miaraka amin'ny dijestin sy vichitos fotsy ary mandoa sombin-kazo amin'ny vilis ary tsy te hihinana izay azoko atao :( Tsy ho tiako ho faty.
Mamaly an'i krishna
Manoro hevitra anao aho mba hitondra azy any amin'ny veterinera. Tsy izaho ary tsy afaka milaza aminao aho.
Ny tena kely dia tsara indrindra ny mahita azy io faran'izay haingana ataon'ny matihanina.
Schirley dia hoy izy:
Manana saka iray efa ho roa volana aho ary mararin'ny tsinay. Nomena pilina izahay handroahana azy fa miverina indray izy ary mitsoka toy ny sombin-javatra,;. Ankoatr'izay, tsy mihinan-kanina na misotro rano izy, tsy manan-katao izy ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy najanona akory io traikefa io teo am-pandriany. Manorotoro ny fanahiko izany.Hahita azy toy izao .. inona no azoko atao, tonga ny mpitsabo biby isaky ny 15 andro .. Ampianaro aho azafady
Valiny tamin'i Schirley
Manoro hevitra anao aho hifandray amin'ireo mpitsabo biby any barkibu.es Tsy mpitsabo biby aho.
Manantena aho fa ho salama haingana ianao.
Ny zava-drehetra ho an'ny saka
Karakarao ny sakao araka izay sahaza azy amin'ireto toro-hevitra ataontsika ireto ary ho tiany izy. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manararaotra ny sasany amin'ireo tolotra azonao izao:
Ahoana ny fandehanana ny saka
Fampiasana Aloe vera amin'ny saka
Raiso ny lahatsoratra farany momba ny saka.
😻 Fihenam-bidy amin'ny saka sy kojakoja saka
Jereo ny tolotra